MITONDRA TENA TSARA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 octobre 14, 2016 Laisser un commentaire sur MITONDRA TENA TSARA
Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Efesiana 5:15-17
– Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny firaisantsika aminy no tena endriny ao anatintsika. Oharina amin’ny firaisan’ny sampana amin’ny foto-boaloboka no tokony hiraisan’ny olona amin’ny Ray izay nahary Azy. Jesosy no nanao io fanoharana io.
– Raha tsy miray amin’I Jesosy isika dia ho sampana maina, tsy afaka hamoa, tsy afaka hanao izay sitrapony ka raha manao aza dia fanao feno hadalàna, koa mety ho hendry eo ivelany ihany nefa tsy araka ny sitrapon’ny Tompo.
– “Mitondra-tena tahaka ny hendry”. Ny Fanahy Masina no hitari-dalana antsika zanany. Zava-dehibe ny fanomezana antsika ny Fanahy Masina, ary mila mazoto mangataka ny Fanahy Masina isika fa hanome antsika fahendrena tokoa Izy. “Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra”. Aoka isika hanaiky ampanetren-tena ho tarihin’ny Fanahy Masina.
Publié parfilazantsaramada octobre 14, 2016 Publié dansUncategorized